अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसको दक्षिणपूर्वी एसिया भ्रमण चीनको लागि चिन्ताको विषय हो? - Dainik Online Dainik Online
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ह्यारिसको दक्षिणपूर्वी एसिया भ्रमण चीनको लागि चिन्ताको विषय हो?
प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०७८, सोमबार ३ : १३
अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले आफ्नो सिंगापुर भ्रमण सोमबारबाट सुरु गरेकी छिन्। उनले आज सिंगापुरका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेको बीबीसीहिन्दीले जनाएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाको भ्रमण गर्न हिँडेकी ह्यारिसले साइबर खतरा, व्यापारमा निम्तिएको बाधा र कोरोना महामारीको समस्याको बारेमा छलफल गर्नेछिन्।
राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासनको लागि यी मुद्दाशरु शीर्ष प्राथमिकता हुन्। बीबीसीका अनुसार सिंगापुरमा ह्यारिसले त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली सिन लुङ र राष्ट्रपति हलिमा याकुबसँग भेट गरेकी छिन्। रोयटर्सका अनुसार ह्यारिसको यो भ्रमणले यस क्षेत्रसँग मजबुत सम्बन्ध बनाउन र चीनसँगको आर्थिक तथा सुरक्षा प्रभावसँग लड्ने लक्ष्य राखेको छ।
एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासनका अधिकारीका अनुसार सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री लीसँग ह्यारिसले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्छन्। ह्यारिसले सिंगापुरको नौसेनाको हवाई बेस चांगी नेभल बेस र यूएसएस टुल्सा युद्धक जहाजको पनि भ्रमण गर्नेछिन्।
सिंगापुर अमेरिकाको संधि साझेदार राष्ट्र होइन तर सुरक्षा साझेदार राष्ट्र भने हो। यी दुई देशबीच गहिरो व्यापारिक सम्बन्ध छ। यद्यपी सिंगापुरले चीन र अमेरिका दुवैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै आएको छ। उत्तर पूर्वी एसियाको यो देशसँग ठूलो बन्दरगाह छ र उसले निशुल्क ढुवानीको समर्थन गर्दछ।
सिंगापुर वरपरको समुद्री क्षेत्रमा चीनले लगातार आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएको छ। यो क्षेत्रमा ह्यारिसले सात दिन भ्रमण गर्नेछिन्। यस दौरान ह्यारिस भियतनाम पनि जानेछिन्।
ह्यारिसको दक्षिणपूर्वी एसिया भ्रमणमा दक्षिण चीन सागरको विषयमा पनि छलफल हुने अनुमान गरिन्छ। कारण भियतनामले पनि चीनले दाबी गर्ने दक्षिण चीन सागरमा दाबी प्रस्तुत गर्दछ। दक्षिण चीन सागर एक रणनीतिक समुद्र मार्ग हो। यो समुद्र तेल र ग्यासजस्ता प्राकृतिक खनिजले सम्पन्न छ। तर यो पुरा समुद्री क्षेत्रमा चीनले आफ्नो अधिकार भएको बताउँछ।
चीनसँगै भियतनाम, फिलिपिन्स, मलेसिया र ब्रुनाईले पनि यो समुद्रमा दाबी प्रस्तुत गर्दछन्। अमेरिकाले चीनको दाबीको बिरोध गर्दछ र अमेरिकी जहाजहरु सो समुद्री क्षेत्रमा तैरिन थालेका छन्। सन् २०१६ मा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि यो सागरमा चीनको दाबी अवैधानिक भएको बताएको थियो। यसबीचमा अमेरिकाले भियतनामलाई चीनविरुद्ध उक्साउन सक्छ।